दान, जनचेतना र शैक्षिक अभियानमा चिकित्सक दम्पती « Nepali Digital Newspaper
२८ असार २०७८, सोमबार ०३:४८
यहाँका एक दन्त चिकित्सक दम्पती दान, जनचेतना र शिक्षा अभियानमा निरन्तर लागिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा परेका बेला सहयोगदेखि दन्तरोग नियन्त्रणका लागि जनचेतना, गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा उहाँहरुले निरन्तर सहयोग गरिरहनुभएको हो ।
भरतपुर, नारायणगढ र टाँडी बजारमा रहेको साइराम डेन्टल केयरका सञ्चालकद्वय डा. अजय न्यौपाने र डा. सरु थापा न्यौपाने आफ्नो कमाइको २० प्रतिशत हाराहारी दानमा नै खर्चिनुहुन्छ । दन्त चिकित्सामा नाम चलेको यो जोडीले दन्त पर्यटनमा पनि अभियान चलाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको १० औँ तहका चिकित्सक डा अजय यहाँको भरतपुर अस्पतालमा दन्तरोग विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । दुई वर्ष बकुलहर रत्ननगर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट भइसक्नुभएका उहाँको जोडीले चितवन, नवलपरासी, धादिङ र गोरखाका गाउँगाउँसम्म पुगेर निःशुल्क सेवा दिएको छ ।
यो जोडीले अहिलेसम्म २५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष परीक्षण गराएर निःशुल्करूपमा औषधिसँगै ब्रस, दन्तमञ्जन वितरण गरिसकेको छ । आफ्नो क्लिनिकमा बिरामी भरिभराउ हुँदै गर्दा यो सङ्ख्या घटाउन जनचेतना जरुरी रहेको डा अजय बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘बालिबालिकाको पाठ्यक्रममा दाँतको सुरक्षासम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्छ ।’ यो जोडीले शिविरमा दाँत निकाल्ने, भर्ने, सफा गर्ने, निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने र जनचेतना जगाउने गर्दै आएको छ ।
देवघाटमा रहेका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क दन्त परीक्षण गर्ने, औषधि, लत्ताकपडा वितरण गर्ने उहाँहरुको नियमित कामभित्र पर्दछन् । बाढीपहिरोका बेला सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर सहयोग गर्ने गरेको डा अजय बताउनुहुन्छ । त्यसो त पछिल्लो समय आएका दन्त चिकित्सकलाई प्रविधि र सीप हस्तान्तरण गर्न आफ्नै खर्चमा यो दम्पतीले गोष्ठी गर्न थालेको छ । वर्षमा दुई वटा गोष्ठी गर्ने योजना रहे पनि कोभिडका कारण हालसम्म तीन वटा मात्रै हुन सकेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले ८० जना हाराहारी दन्त चिकित्सकलाई यहाँ बोलाएर दुईदेखि तीन दिनको आवासीय निःशुल्क कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ ।’ उहाँहरुको आफ्नै खर्चमा यी कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । कोरोना घटेसँगै वर्षमा दुई वटा यस्ता कार्यक्रम गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँहरुको बुझाइ छ ।
डेन्टल टुरिजमअन्तर्गत रत्ननगर नगरपालिका र क्षेत्रीय होटल सङ्घसँग मिलेर साइराम डेन्टलले अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमसमेत गरिएको थियो । विदेशमा दाँतको उपचार महँगो हुने हुँदा युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतमा देशमा रहेका नेपाली उपचार गर्न यहाँ आउने गर्दछन् । यस अभियानमा विदेशीलाई समेत जोड्ने जमर्को यो दम्पतीले गरेको छ । दाँतको उपचार निकै महँगो हुने भए पनि अरु देशको तुलनामा नेपालमा ८० प्रतिशत सस्तो हुने गरेको पाइन्छ । थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनामजस्ता देशले डेन्टल टुरिजममा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै डा अजयले भन्नुभयो, “नेपालमा पनि यो निकै राम्रो गर्न सकिन्छ । यहाँको भविष्य उज्ज्वल छ ।” नेपाल शान्त देश, अतिथि सत्कारमा उत्कृष्ट, दाँतको उपचारमा दक्ष जनशक्ति, विदेशकै उपकरणको प्रयोग भए पनि खर्च कम लाग्ने गरेको छ ।
दन्त चिकित्सा क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाउन यो दम्पतीले पढ्दै गरेका चिकित्सक र भर्खरै कर्ममा लागेकालाई विभिन्न ढङ्गले सहयोग पनि गर्दै आएको छ । गत वर्षको कोभिडताका रु १२ लाख उनीहरुका लागि यो दम्पतीले खर्च गरेको थियो । डा सरुका अनुसार पढ्दै गरेका विद्यार्थी र भर्खरै काम थालेका दन्त चिकित्सकलाई रु १० लाख र नेपाल डेन्टल एशोसिएशनलाई रु दुई लाख सहयोग गरिएको हो । यस वर्ष अक्सिजन, मास्क, पिपिईजस्ता स्वास्थ्य सामग्री सरकारी अस्पताल, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । रु. ६ लाखभन्दा बढीको सामग्री किनेर वितरण गरेको सरुले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत जनचेतना जगाउन रत्ननगर नगरपालिकासँग मिलेर तालीम गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘दाँतको उपचार गर्नै नपर्ने गरी जनचेतना जगाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ ।’ कसरी बिरामी घटाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेको यो जोडीमध्येकी सरु भन्नुहुन्छ, ‘बच्चाको औषधि गुलियो हुने र खाएपछि कुल्ला गर्न नभनिएकै कारण धेरै बालबालिकाको दाँत बिग्रिएको छ ।’ बाल रोग विशेषज्ञसँग यस विषयमा अन्तक्र्रिया गर्ने तयारीमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । सरुले भन्नुभयो, ‘दाँतमा समस्या भएको बच्चा अन्य बच्चाको तुलनामा मानसिक र शारीरिक विकासमा पछि पर्छ ।’
नेपालमा रोगको रोकथाम नै गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले उपचार गर्न आवश्यक सङ्ख्यामा चिकित्सक नभएको, औजार उपकरण खरिद गर्न आवश्यक बजेट नपुग्ने र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो खर्च हुने हुँदा गाउँगाउँसम्म यो सेवा पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उपचार महँगो तर रोकथाम अति सस्तो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जनचेतना जगाएर रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर उपचार महँगो छ ।’ उहाँहरुसँग निकट सम्बन्ध राख्नुहुने वरिष्ठ पत्रकार दीपक आचार्य सामाजिक सेवामा युवा उमेरमा यो चिकित्सक दम्पतीले गरेको योगदान उदाहरणीय रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, त्यहाँ सहयोग लिएर यो दम्पती पुग्ने गरेको छ ।’ रोग लाग्न नदिनका लागि जुन अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएको छ त्यसलाई सबैको साथ र सहयोग चाहिने उहाँको भनाइ छ । ट्रष्ट बनाएर यस्तो सहयोग गर्न आफूले सुझाव दिएको आचार्यको भनाइ छ ।